समस्याग्रस्तमुक्त जनरलको औपचारिक कारोवार सुरु
काठमाडौं, ७ पुुस । समस्याग्रस्तमुक्त घोषणा भएको जनरल फाईनान्सले औपचारिक कारोवार सुरु गरेको छ । गर्भनर डा चिरञ्जीवी नेपालले समस्याग्रस्त मुक्त घोषणा भएको जलरल फाईनान्सको औपचारिक कारोवारको उद्घाटन गरेका...
बैंक अफ काठमाडौको ब्राण्ड एम्बेसडरमा धुर्मुस सुन्तली
काठमाडौं, ७ पुुस । बैंक अफ काठमाडौको ब्राण्ड एम्बेसडरमा धुुर्मुुस सुन्तली नियुुक्त भएका छन् । बैंकले आप्mनो सेवा र व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न समाजसेवी एवं हास्य कलाकारद्वय सीताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्...
नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मस बंैक र बुम रेमिट्यान्सबीच सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मस बंैक लि. रजिष्टर्ड कार्यालय बागबजार, काठमाण्डौं र बुम रेमिट्यान्स प्रा.लि. कालिमाटी सोल्टीमोडका बिच आजका दिन देखि लागु हुने गरी बुम रेमिट मार्फत नेपालीले विदेशबा...
देवघाटमा पहिलो पटक ज्योति बैकको एटिम सेवा सुरु
काठमाडौ पुस ५ । पवित्र धार्मिक तिर्थस्थल तनहुँ र चितवनको सिमानामा पर्ने देवघाटमा पहिलो पटक एटिम सेवा सुरु भएको छ । जेष्ठ नागरिकहरुलाई सहज रुपमा बैकिङ्ग कारोबार सेवा दिने उद्देश्य ज्योति विकास बैक भरत...
नेप्से १८ अंकले घट्यो, अन्य बाहेक सबै समुहले गुुमाए – तालिकासहित
काठमाडौं, ५ पुुस । नेप्से आज पनि १८ दसमलव ८९ अंकले घटेर १४ सय ९५ दसमलव ९९ बिन्दुुमा कायम रहेको छ । नेप्से सेन्सिटिभ पनि चार दसमलव १८ बिन्दुुले घटेर तीन सय २३ दसमलव ४० बिन्दुुमा कायम रहेको छ । आज कु...
नेप्सेमा १६ अंकको उच्च गिरावट, ५६ करोड रुपैयाँको सेयर खरिद बिक्री कसले के कति कमायो-गुमायो ? (तालिकासहित)
काठमाडौं, ४ पुस । साताको दोस्रो दिन सोमबार आज नेप्से १६ दसमलव ४७ अंकले घटेर १५ सय १४ दसमलव ८८ अंकमा कायम रहेको छ । नेप्से सेन्सिटिभ पनि तीन दसमलव ७१ अंकले घटेर तीन सय २७ दसमलव ५८ अंकमा कायम रहेको छ ।...
अल्पाईन डेभलपमेन्ट बैंकद्धारा हकप्रदको घोषणा
काठमाडौं, ४ पुुस । अन्पाईन डेभलपमेन्ट बैंकले हकप्रद सेयर जारी गर्ने घोषणा गरेको छ । बैंकको आईतबार बसेको सञ्चालक समितीको एक सय २० औं बैठकले हाल कायम रहेको चुक्ता पुंजीको तीन बराबर दुुई दसमलव आठको अन...
नेप्सेमा झिनो सुधार, ६२ करोडको सेयर खरिद बिक्री
काठमाडौ, ३ पुुस । साताको पहिलो दिन आज आईतबार नेप्सेमा झिनो सुधार देखिएको छ । नेप्से आज एक दसमलव २९ अंकले बढेर १५ सय ३१ दसमलव ३५ अंकमा कायम रहेको छ । नेप्से सेन्सिटिभ पनि आज शुन्य दसमलव ३१ अंकले बढे...